နောက်ထပ်သုံး LEGO Friends သူအပါအဝင်ထုတ်ဖော် 2021 အစုံartအင်းအိုင် City Shopping Mall
21 / 01 / 2021 21 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1726 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, 41058 သူartအင်းအိုင် City Shopping Mall, 41440 သူartအင်းအိုင် City မုန့်ဖုတ်ရုံ, 41442 VET ဆေးခန်းကယ်ဆယ်ရေး Buggy, 41446 သူartအင်းအိုင် City Vet ဆေးခန်း, 41450 သူartအင်းအိုင် City Shopping Mall, Friends, Lego
လာမည့်သုံးခု၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံများ Lego Friends အစုံ - အပါအဝင် 41450 သူartအင်းအိုင် City Shopping Mall - အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
A စားသုံးသူ catalog ကျွန်တော်တို့ကိုလေးယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတစေ့တစောင်းကိုပေး၏ Lego Friends ၂၀၂၁ မတ်လသည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်၊ သို့သော်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့တရားဝင် box ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခြင်းဖြစ်သည် art နှင့်သူတို့ထဲကသုံးများအတွက်ထုတ်ကုန်ပုံရိပ်တွေ, တစ် ဦး ၏ယဉ်ကျေး ဘူဂေးရီးယားအွန်လိုင်းစတိုး.
41450 သူartအင်းအိုင် City Shopping Mall ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားအရုပ်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၄၁၀၅၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လက်လီအရောင်းဆိုင်အရသာကိုပထမ ဦး ဆုံးအရသာအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။artအင်းအိုင် City Shopping Mall ။ သေတ္တာ၏နောက်ကျောကကျွန်ုပ်တို့ကိုအလုပ်လုပ်သောစက်လှေကားကိုလည်ပတ်စေသော conveyor belt ယန္တရားကိုအနည်းငယ်အနီးကပ်ကြည့်ရှုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအတိအကျသိရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်ရှိနေသည့်တိုင်အောင်စောင့်ရမည်။
အခြားအသစ်စက်စက်ထုတ်လွှတ်သောအရာနှစ်ခုသည်လည်းအစဉ်အမြဲတိုးတက်နေသောအခြေအနေကိုဖြည့်စွက်သည် Lego Friendsအတွက် 41440 သူartအင်းအိုင် City မုန့်ဖုတ်ရုံ နှင့် 41446 သူartအင်းအိုင် City Vet ဆေးခန်း။ ယခင်သည်အသက်ငယ်ရွယ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် DUPLO နှင့် System အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်ရန်အတွက် 4+ အစုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ် Lego Friends ကျွန်ုပ်တို့တွင်တရားဝင်ပုံများမရှိသေးသော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်စတင်မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်းသင်မြင်တွေ့နိုင်သည် 41442 VET ဆေးခန်းကယ်ဆယ်ရေး Buggy ထဲမှာ နယူးဇီလန်စားသုံးသူ catalog။ အသစ်စက်စက် ၁၃ ခု Lego Friends ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်မှာယခုရရှိနိုင်ပါသည်အစုံ LEGO.com - စာရင်းအပြည့်အစုံကိုစစ်ဆေးပါ ဒီမှာ.
← LEGO Creator Space Mining Mech နှင့် Tree House တို့၏တရားဝင်ပုံရိပ်များ
Lego ၏တရားဝင်ပုံများ DOTS မတ်လ 2021 စုဆောင်းခြင်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ကြသည် →